ओली सरकारले ल्याएका दुई कार्यक्रम : कार्यान्वयन गर्न देउवा सरकार किन बाध्य भयो ? - Abhiyan news
१७ भाद्र २०७८, बिहीबार १३:५० अभियान न्यूजLeaveaComment on ओली सरकारले ल्याएका दुई कार्यक्रम : कार्यान्वयन गर्न देउवा सरकार किन बाध्य भयो ?
चर्को विरोध हुनेभएपछि ओली सरकारले ल्याएका दुईओटा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न देउवा सरकार बाध्य भएको छ ।
अघिल्लो सरकारले ल्याएको चालू बजेटका योजना तथा कार्यक्रम रोकिरहेको यो सरकारले सबैखाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता र कर्मचारीको वृद्धि भएको तलब कार्यान्वयन नगरे अप्ठ्यारो पर्ने भएपछि लागू गरेको हो ।
सरकारले कर्मचारीको नयाँ तलबमान सार्वजनिक गरेको छ । बजेटमार्फत १८ देखि २० प्रतिशत तलब बृद्धिको घोषणा गरिएको थियो । तर नयाँ तलबमान सार्वजनिक भएको थिएन ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले निजामती कर्मचारी, सेना, प्रहरी र शिक्षकको नयाँ तलबमान निर्धारण गरेको छ । जसअनुसार मुख्यसचिवको तलब ६९ हजार ४८२ रुपैयाँ भएको छ भने प्रदेश र स्थानीय तहतर्फ अधिकृत एघारौंको ५९ हजार २५ सम्म छ । यससँगै यो कार्यक्रम समेत लागू हुनेछ ।
इजरायलको रोजगारीका लागि भाषा परीक्षा सकियो, अब कसरी छानिएर, कहिले जान पाइन्छ त ?
२८ भाद्र २०७८, सोमबार १३:५२ अभियान न्यूज
१३ भाद्र २०७८, आईतवार ०३:०७ अभियान न्यूज
नबिल र नेपाल बंगलादेश बैंकबीच मर्जरमा जाने सहमति
१५ पुष २०७८, बिहीबार १२:१३ news DM